iOS တွင်သတင်းသတိပေးချက်များထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ခြင်းကိုပိတ်ခြင်း ငါက Mac ကပါ
အသုံးချ | | iOS ကို, Mac အတွက်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများ, လဲ tutorial
သင့် iPhone ပေါ်တွင်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုပို့တိုင်းသတိပေးချက်သတိပေးချက်သည်နှစ်ခါလာသည်ကိုသင်သတိပြုမိပါသလား။ ပထမအချက်အနေဖြင့်၊ နှစ်မိနစ်အကြာတွင်ဒုတိယ။ အထူးသဖြင့်၎င်းသည်အရေးကြီးသောသတင်းစကားတစ်ခုဖြစ်ပြီးမည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆို၎င်းသည်ဖတ်ရန်နှင့်တုန့်ပြန်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြောင်းသတိပြုမိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ဤသတိပေးချက်ကိုမိတ္တူပွားယူလိုသည်ဟုသင်မခံစားရပါကထိုလုပ်ဆောင်မှုအားပိတ်ထားနိုင်သည်။ ၂ မိနစ်ကြားကာလဖြင့်သင့်အား ၁၀ ကြိမ်တိုင်တိုင်အကြောင်းကြားရန်၎င်းကိုပင် configure လုပ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည် clueless အများဆုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကြည့်ကြရအောင် ထပ်ခါတလဲလဲမက်ဆေ့ခ်ျကိုအကြောင်းကြားစာကို turn off ဘယ်လို.
မျက်နှာပြင်၏အောက်ဆုံးသို့သွားပြီး "Repeat alerts" ကိုနှိပ်ပါ။
ယခု "Never" ကိုနှိပ်ပါ။ သို့မှသာလက်ခံရရှိသည့်စာများအတွက်သတိပေးချက်များကိုဘယ်တော့မှထပ်မံမရရှိတော့ပါ။
လိမ္မာပါးနပ်! ယခု မှစ၍ သင်သည်သင်၏သတင်းအချက်အလက်ကိုသင့်ထံရောက်ရှိသည့်အချိန်တွင်တစ်ကြိမ်သာလက်ခံရရှိမှုတစ်ခုသာလျှင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည် iPhone ကို သို့မဟုတ် iPad ။ သို့မဟုတ်ပါကသင်ဆန္ဒရှိသလောက်နှစ်မိနစ်အတွင်းနှင့်အများဆုံးဆယ်ဆအထိသင်အကြိမ်ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်လိမ့်မည်။
စကားမစပ်, သငျသညျနားမထောင်ကြပြီ ပန်းသီးစကားပြောဇာတ်လမ်းတွဲ, အလျှောက်ထား Podcast တခုကို?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » iOS ကို » iOS ပေါ်ရှိ message သတိပေးချက်များကိုထပ်လုပ်ခြင်းကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
တီဗီ 9.2.2 beta4ကိုယခု developer များရရှိနိုင်ပါသည်
OS X 10.11.6 El Capitan ၏စတုတ္ထ beta ကို developer များရရှိနိုင်ပါသည်